फुटपाथे पसलेहरु पुन व्यपार गर्न फर्कदै - Worldnews.com
फुटपाथे पसलेहरु पुन व्यपार गर्न फर्कदै
रत्नपार्कमा नगरप्रहरीको आगमनबाट लखेटिएका फुटपाथे पसलेहरु पुन व्यपार गर्न फर्कदै। कुनै समयमा फुटपाथे बजारका रुपमा प्रख्यात रत्नपार्क केहिबर्ष आघि महानगरपालिकाको सक्रिय भूमिकामा बजार विस्थापित गरिएको थियो। यस ठाउमा महानगरपालिकाको कडा निगरानीलाई छलेर जीविकोपार्जन गर्न अझै फुटपाथे पसलेहरु आउने गर्छन। तस्विरः अनिल आङदेम्बे ...
बीच सडकमा पसल
बाँके, (नेस) बीच सडकमा पसल ? धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । नेपालगञ्जको त्रिभुवनचोकमा भने खासखास पर्वमा बीच सडकमा पसल राख्नु ‘परम्परा’जस्तै भएको छ । भोलीको रक्षा बन्धनलाई...
News of Nepal 2018-08-26
फुट्कर फूटपथे पसले बिस्थपित हुँदै
कुपोन्डोल नजिकै खोला किनारमा ग्राहकलाई कपडा देखाउदै पसले। काठमाडौं महानगरपालिकाले नियम कडाइ गरेपछि फुट्कर फूटपथे पसले बिस्थपित हुँदै आफ्नै सवारीसाधन साथ विभिन्न ठाँउमा...
News of Nepal 2018-10-29
बिदेश गएका पति छाडेर अर्कैसँग बिबाह गरेकी महिलामाथि निर्घात कुटपिट
बैदेशिक राेजगारमा गएका पतिलार्इ छाेडर गाउँकै अर्का पुरूषसँग प्रेम सम्बन्ध रही बिवाह गरेकी एक महिलामाथि स्थानीयवासीले निर्घात कुटपिट गरी गाउँ निकाला गरेका छन् । दोस्रो विवाह...
उफ् ! राजधानीको धुवाँ, धूलो र सवारी
रमेशकेसरी वैद्य मानिसहरू राम्रो लुगा लगाएर हिँड्नु नै सभ्यताको पहिचान ठान्दछन्, तर जथाभावी फ्याँकेको फोहोरमैलाले उनीहरूको सभ्यताको वास्तविकरुपमा परिचय दिइराखेको हुन्छ।...
News of Nepal (NewsDB Live) 2017-03-09
उमाकान्त पाण्डे युएईमा जागिर लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा मानव तस्करी गर्ने गिरोह फेरि सकृय भएको पाइएको छ । जागिरको लोभ देखाई २४ जना युवालाई युएई ल्याएर अलपत्र बनाएपछि भिजिट...
ठाउँ अभावले तरकारी पसले बिस्थापित, तरकारी पसलेको टहरा खेलाडीले भत्काइदिए
गणेश घिमिरे, इलाम । इलाम बजारमा तरकारी पसल थाप्दै आएका तरकारी पसलेहरू बिस्थापित भएका छन् । तरकारी पसल राख्ने ठाउँ नपाएपछि उनीहरु बिस्थापित बनेका हुन् । जस कारण यहाँका सयौं...
News of Nepal 2018-08-14
गणेश घिमिरे, इलाम । इलाम बजारमा तरकारी पसल थाप्दै आएका तरकारी पसलेहरू बिस्थापित भएका छन् । तरकारी पसल राख्ने ठाउँ नपाएपछि उनीहरु बिस्थापित बनेका हुन् । जस कारण यहाँका सयौं उपभोक्ता तरकारी किन्नबाट वञ्चित भएका छन् । चोक बजार छेउमा रहेको साविकको कृषि बजारमा इलाम नगरपालिकाले व्यपारिक प्रयोजनको सिटी मार्ट भवन बनाउने तयारी गरेपछि करिब सयको संख्याका तरकारी पसले विस्थापित भएका छन् ।...
भारतबाट दशैँ मनाउन घर फर्किंदा सीमामा आइनपुग्दै लुटिन्छन् नेपाली
भीमदत्तनगर, गतवर्ष दशँैंका लागि भारतको राजधानी दिल्लीबाट घर फर्किरहेका चितवन गितानगरका नीरबहादुर थापा पश्चिमी नाका गड्डाचौकीमा आफूसित भएको नगद र सामान लुटिएर अर्धचेत अवस्थामा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आइपुग्नुभयो । उहाँसित भएको रु ६७ हजार नगद, मोबाइल र साथमा रहेका लत्ताकपडा भारतमै लुटिएको थियो । कुरो गतवर्ष दशैँंमा घर फर्किन लागेका नीरबहादुरको मात्रै होइन । उहाँजस्तै सयाँैं...
तिर्थयात्रु लिएर फर्कदै गरेको बस भीरबाट खस्दा ४५ जनाको मृत्यु
भारतको तेलङ्गाना राज्यको जगतियाल जिल्लामा मङ्गलबार भएको बस दुर्घटनामा कम्तीमा ४५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अरु धेरैजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।यात्रुले खचाखच भरिएको राज्य सञ्चालित एउटा बस गहिरो खोचमा खसेको थियो । उक्त बसमा ५० भन्दा बढी यात्रु सवार रहेको पनि...
फुटपाथ ओगटेर गरिँदै आएको व्यापारलाई निषेध गर्ने अभियान काठमाडौं महानगरपालिकाले शुरु गरे पनि यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । काठमाडौंको व्यस्त शहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारण बटुवाले खेप्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो सास्ती भनेकै फुटपाथको व्यापार हो । पिच सडकका सवारीसाधनका कारण खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन, पैदल हिँड्नका लागि बनाइएको फुटपाथ व्यापारीका सामानले ओगटिएको हुन्छ । आफ्नै सवारीसाधन...
प्रहरीले जे गर्न पनि मिल्छ र ?
काठमाडौँको न्यूरोड सधैँ व्यस्त रहन्छ। दैनिक अथाह मानिसको चाप र भीडभाडले भरिएको यो ठाउँमा अनेक प्रकारका मानिसको आगमन हुने गर्दछ। पैदल यात्रीदेखि लिएर व्यापारी अनि सहयोगका लागि हात फैलाउने मानिसहरू पनि न्यूरोडमा धेरै देखिन्छन्। त्यति मात्र नभई वृद्धवृद्धाहरूले पनि अमला र कागतीको थुप्रो लगाएर व्यापार गरेको देखिन्छ। उनीहरू बिहान सबैरै बाटोमा बोरा बिछ्याउँछन् अनि अमला र कागती...